[Matipi] Kuvandudza LXDE | Kubva kuLinux
[Matipi] Kuvandudza LXDE
AurosZx | | Chitarisiko / Kuita munhu, GNU / Linux, Dzidziso / Mabhuku / Matipi
Sezvo chikamu chakanaka chezvinyorwa zveblog chakaitirwa Xfce, KDE, uye mumwe kune mumwe apo neapo kushoropodzwa kweGnome, Ndaida kupa nzvimbo yake LXDE. Isu tinoziva izvozvo nekutadza LXDE haina kukwana se, semuenzaniso, Xfce. Dzimwe nguva iwe unotofanira kuenda kune zvimwe zvikamu zvemamwe madhesiki kuti uzvisiye zviri nyore. Nhasi ndinokuunzira Matipi akatiwandei ayo anotendera iwe kuti uve ne LXDE zvakanyanya kusununguka 😉
Tisati tatanga, ndinofungidzira iwe uchitova neyakareba distro yakagadzirira (kana vachizotanga kubva pakutanga ...). Ndokunge, vatove nazvo Xorg, UN musangano maneja (kana vachishandisa) uye LXDE yakaiswa. Nekuti LXDE zvinokurudzirwa LXDM semaneja wechikamu, kunyangwe ndichiida zviri nani ChiedzaDM.
Kana iwe usati waisa iyo distro, kana iyo desktop, zvingave zviri nyore kusiya zvimwe pano:
Archlinux: base kuisirwa (KubvaLinux) (Gespadas), kuiswa kweLXDE (KubvaLinux(Gespadas).
Debian: base kugadzwa (Taringa), Kuiswa kweLXDE (Wiki).
Ndidzo Mienzaniso miviri izvo zvandinogona kupa. Ini handizvinyorazve neruoko nekuti ivo vatovepo, iwe unongoda kuvabatanidza. Ini yangu, ndakazviita mukati Archlinux, uye ini ndaishandisa madhairekisheni mana, ndichivaenzanisa uye ndichiwedzera mune chimwe chaive chisipo mune imwe. Ndinokurudzira izvozvo.
Ndakaona zvakare kuti Elav anga agadzira mini gwara zvisati zvaitika, ini ndinosanganisira zvimwe zvinhu pano sezvo uchifanira kuchipa chakakodzera 😉
1 LXMED, yemenyu mhariri yeLXDE
2 Zvidimbu zveDesktop
3 Rongedza mapfupi e-LXDE keyboard
4 Wedzera mapfupi akakosha kumenyu yeLXDE
5 Tsiva LXPanel neLXPanelX
6 Tsiva PCManFM ne SpaceFM
7 Gadzira Openbox kubva kuLXAppearance
8 Yakakurudzirwa marongero neLXDE
LXMED, yemenyu mhariri yeLXDE
Kubata kweLXMED mukuuraya.
Chekutanga chinhu chekutanga. Izvi zvichadikanwa kune zvimwe zvikamu zveiyi dzidziso. LXMenu Mupepeti yakagadzirirwa nechinangwa chekupa LXDE un Menyu mupepeti yakapusa, asi inoshanda. Uye zvirokwazvo, Kwete chete Inoshanda ne LXDE, zvakare Ini ndakabudirira kuyedza nayo Xfce 🙂
Chinhu chega chinoda LXMED kushanda iJava (OpenJDK / Oracle chero chinoshanda) uye, zvinoenderana nedistro, gksu / beesu / nezvimwe ...
Tinodhawunirodha pano. Ipapo, tinoisvinura, tinopinda muhodha, uye mune terminal tinoita:
Uye ichave yakaiswa. Tichaiwana mumenyu LXDE pasi pechikamu «zvaunofarira«, Kunyangwe zvichishamisa kuti pachave neiyo Zita muchirungu. Vanofunga zvakafanana neni here? Isu tichagadzirisa iyo yekupinda menyu, yemenu edhita, ine iyo yemenyu edhita yacho pachayo: Menyu-Kutanga ????
Tinovhura LXMED uye ichatikumbira isu ku mudzi password. Isu tinosuma iyo, tinya pa «kubvuma"uye wagadzirira. Ngatiendei kuchikwata «Zvaunogona Kuchinja»Uye tinya pa«Menyu Mupepeti", Zvino mukati"Hora«. Muzita, woisa zvaunoda. Ndanyora "Rongedza main menyu".
Yakachena desktop uko mapfupi anokosheswa.
Chero ani akashandisa mamwe madhesiki senge Xfce, iwe unogona kunge wakacherekedza kuti kubva pakutanga kune mashoma shortcuts for the Yemunhu dhairekitori, Bepa repepa, Etc.
LXDE Ndaiwanzo kuunza imwe yeiyo Yemunhu dhairekitori, yakadaidzwa Zvinyorwa Zvangu (Windows Inowanikwa? xD), asi zvaenda. Saka, isu tichagadzirisa vamwe vatambi kuwana mhedzisiro yakafanana.
Isu tinovhura menyu ye LXDE, uye isu tinotarisira iyo File Manager »Kurudyi Dzvanya» Wedzera kuDesktop. Pakazara, tichazviita kanenge katatu. Izvi zvinotevera kuvhura imwe neimwe yavo nechinyorwa chinyorwa uye kugadzirisa zvikamu zvinoratidzwa pazasi:
Name=Equipo (o como prefieran).
Name[es]=Igual que en Name.
Yeye Yemunhu Folda icon:
Name=Carpeta Personal (o como prefieran).
Nezve marara anogona icon:
Name=Papelera (o como prefieran).
Nezvo isu tinofanirwa kunge tatova nemifananidzo mitatu yekutanga pane desktop 🙂 Nayo iwo matanho aunogona kugadzira mamwe mapfupi.
Rongedza mapfupi e-LXDE keyboard
Kubata kweObkey kugadzirisa LXDE mapfupi ekhibhodi.
LXDE hazviuye nekutadza nechishandiso chakadai. Asi kubvira LXDE inoshandisa Openbox, tinogona kushandisa Obkey 🙂 Kuiisa pane Debian zvingave:
sudo apt-get install obkey
sudo pacman -S obkey
Nokutadza Obkey anovhura iyo faira Openbox chii chiri mukati ~ / gadziriso / openbox / rc.xml. Asi, kana tikazvitangisa seizvi:
Saka kana iwe ukavhura iyo faira LXDE. Zvino, ngatitii tinoda kudzvanya kiyi [Dhinda] mhanya scrot kutora skrini ... Isu tinoita iyo yapfuura kuraira, tinya pane iyo yechipiri yepamusoro bar icon (iyo yekuwedzera). Muchikamu Actions, tinosarudza «Execute«, Uye pamusoro, panoti«murayiro»Tinonyora, semuenzaniso:
scrot '%Y-%m-%d-%H:%M:%S_$wx$h.png' -e 'mv $f /home/usuario/Capturas/'
Handifanire kutaura kuti «mushandisi»Izita rako rekushandisa kana hongu? Izvo zvaizogadzira skrini ine nguva uye zuva, uye Ini ndaizoichengeta mufaira "Kubata"kubva kune yako musha. Chekupedzisira, tinya pakidimbudzira panzira, uye pinda kiyi [Dhinda]. Isu tinoponesa, uye voila! Mutsva mutsva wekhibhodi.
Wedzera mapfupi akakosha kumenyu yeLXDE
Tora paunoona mapfupi mumenyu yeLXDE.
Sezvo ndaiziva izvozvo LXMED rega ndigadzirise menyu, ndakamhanya kugadzira zvimwe zvipfupi kugadzirisa zvakajairika LXDE sarudzo pakarepo
Uyo anoti «LXDE autostart»Ipfupiso yekugadzirisa kunyorera kana maitiro anotangwa nawo LXDE.
«LightDM GTK Kwaziso»Iko kugadzirisa kutaridzika kweGTK kwe ChiedzaDM.
Ini ndakagadzira imwe muchikamu che accessories, chinonzi «Faira maneja (mudzi)"Izvo zvinovhura PCManFM semudzi.
Zvakangoitikawo, pane imwezve iyo inovhura Obkey achinongedzera kuLXDE faira 🙂 Inonzi «Rongedza mapfupi e-LXDE keyboard".
Tsiva LXPanel neLXPanelX
Ehe, LXPanelX inoratidza preview windows 😀
Ichokwadi, kune iyo pani LXDE irikushaikwa zvimwe zvinoita kuti riwedzere kugadzirisika / kubatsira, saka… sei tisingachinje? Imwe nguva yapfuura a LXDE pani forogoakadanwa LXPanelX. Zvimwe zvinorema zvishoma pane iyo LXPanel zvetsika, asi kana vachida kushandisa zvishoma RAM usazeze kuyedza 🙂
Chekutanga pane zvese, isu tinofanirwa kuita shanduko mufaira LXDE autostart. Saka semudzi, tichishandisa yedu yepamoyo mupepeti, isu tichaivhura. Semuyenzaniso:
Mukati maro, tichaona mutsetse unoti:
Isu tichango shandura seizvi:
@lxpanelx --profile LXDE
Uye wakagadzirira. Zvino, kuisa shanduko ipapo ipapo, uye tanga kumisikidza LXPanelX pazororo rako, ingovhura terminal, woita:
killall lxpanel && lxpanelx --profile LXDE
Izvo zvichave zvakakwana. Kana ingo tangazve iyo PC xD
Iko kune zvakare imwe tsananguro. Mutauri we LXPanelX haizovhurike kana iwe ukadzvanya [Alt] + [F2], nekuti inouya nekumira kuvhura de LXPanel (ehe, iwo murairo wakasiyana). Saka, na Obkey, isu tichavhura iyo faira LXDE uye isu ticha tsvaga chikamu icho iko ipfupi ye [Alt] + [F2], uye isu tichagadzirisa rairo yako. Tichazvisiya seizvi:
Iye zvino iyo yekutanga application ichavhura.
Tsiva PCManFM ne SpaceFM
Tora kubva SpaceFM.
Kare kare pakanga pataurwa nezve SpaceFM panoNdicho PCManFM forogo, inonzi futi PCManFM-Mod, uye hapana chimwezve uye hapana chakaderera pane PCManFM iine mamwe mabasa, uye nekushandisa kumwe chete. Ini pachangu, ini ndichiri kushandisa PCManFM, Ini handidi sarudzo dzakawanda kudaro. Asi kana uchida shandisa SpaceFM nekutadza, Ndinovadzidzisa.
Tichagadzirisa iyo faira LXDE autostart. Pane tambo inoenda seizvi:
Tichachinja kuti chioneke seichi:
@spacefm --desktop --profile LXDE
Nezvo SpaceFM ichagadzirisa desktop panzvimbo ye PCManFM. Panyaya iyi vese vakafanana, saka handishandise 😛 Kunyangwe mafonti achitaridzika zvishoma ne SpaceFM, ndingati. Zvino, kuti shanduko ive yekukasira, isu tinoita mune yekutanga LXDE:
killall pcmanfm && spacefm --desktop --profile LXDE
Nezvo ichave yakagadzirira 🙂
Gadzira Openbox kubva kuLXAppearance
Default LXKuonekwa zvinongotarisira dingindira GTK, mifananidzo, fuente y cursor. Asi isu tinogona kuzvinunura pachedu tichifanira kuvhura ObConf, Kuisa iyo package lxaperance-obconf, iyo inofanirwa kuve iripo mune mazhinji (kana asiri ese) mugove.
Yakakurudzirwa marongero neLXDE
Kuti ndipedze, ndinokusiira diki runyorwa rwema distros ayo andakaedza neLXDE uye ayo ini ndinofunga akakosha.
Trisquel Mini. Kubva paUbuntu. Iyo chete ine emahara mapakeji, uye iyo LXDE yakafanana neLubuntu asi yakapusa. Kuongorora kwaMaxwell, inowanikwa Trisquel 5.5 STS Brigantia, peji yepamutemo.
PCLinuxOS LXDE (Mini, ko iro iso rakadzika). Tsika yakanaka LXDE, kunyangwe yakati kuremerwa kuravira kwangu. Iyo inouya nehukuru hwevatyairi nekutadza. Iyo inoshandisa RPM mapakeji, asi inovabata neAPT. Pandev92 kuongorora, peji yepamutemo.
ROSA Linux Marathon 2012 LXDE. Yakareruka, semi-yakasarudzika uye yakakwana kwazvo LXDE, zvakare yakanaka. Iyo LTS, uye forogo yeMandriva. Yakaburitswa ROSA Linux Marathon 2012, peji yepamutemo (LXDE yemunharaunda vhezheni peji).
Lubuntu. Iyo yepamutemo Ubuntu yakatorwa (yakagamuchirwa neCanonical senge vhezheni 12.04 LTS) neLXDE. Yakakurudzirwa, yakaderera kudyiwa (anenge 80MB), yakanaka mifananidzo, ine mashoma mashandisiro uye nevamwe. Webhusaiti yepamutemo.
Fedora Spin LXDE. Iyi ndeimwe yandinokurudzira. Yakareruka, iine yakanaka kwazvo pasuru maneja, LXDE's default kuoneka (asi inogona kugadziriswa) Spin LXDE yepamutemo peji.
Idzo idistros OOTF (Kunze kweBhokisi, kana kugadzirira kushandisa). Kune zvekare zvimwe sarudzo, senge Debian, Arch, Gentoo, Mageia 2, Slackware… Ndeapi mashoma, uye anokodzera mamwe. Kune avo ini ndaizogara zvakanyanya naDebian naArch 😉
Uye zvakanaka, iwoyo waive mutungamiri wangu kuLXDE. Iwe unoziva, gwaro rino rinogona kuramba richikura… Ah, pfungwa! Kana ivo vachibiridzira LXDE, vasiye mumakomenti, uye ini ndichifara kuwedzera ivo kumutungamiriri. Mufaro! 😀
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Chitarisiko / Kuita munhu » [Matipi] Kuvandudza LXDE
Adoniz (@ NinjaUrbano1) akadaro
Chokwadi chinonakidza asi iyo Lxpanelx yakanyanya sei memory yaizoshandisa 10 50 kana 200 mb kuwanda?
Ichokwadi ndechekuti inoratidzika kunge yakasarudzika asi iwe waizofanira kuona yakawanda kana kuti shoma sei gondohwe rinokwira kana vari gumi kusvika kumakumi mashanu emamigabhayeti ingangove yakasarudzika.
Pindura Adoniz (@ NinjaUrbano1)
Usave anonyanyisa, angangoita 25 MB ye RAM zvakanyanya kana zvishoma, sekurangarira kwandinoita ...
Icho chikuru chirevo chekuti icon theme iri kana rinotaridzika kunge linuxmint kunyanya pabhawa yepamusoro.
Ndatenda kwazvo AurosZx, neizvi pamwe ndinozvikurudzira kuisa arch + lxde 😛
Ndatenda neano Akanakisa Matipi ekuvandudza LXDE uye ndichavaedza ivo los
Ini ndaifanira kuverenga zvekare chinyorwa ichi. iyo desktop inotaridzika zvinoshamisa. Ini ndaitofunga kuti yaive KDE! 🙂
Hehe, ndeyekuti LXPanelX inoshanda zvinoshamisa… Thanks 😉
zvirokwazvo ndinofanira kutaura nokutendeseka, ndiyo inonyanya kushamisa desktop yeLXDE yandakamboona! Ndakanga ndisingazivi kuti ndaive nemikana iyoyo.
kana ichinyatsogadziriswa, chete menyu yepasirese ndiyo isipo
Imwe distro yandaida yaive Linux Mint (ndinofunga yaive 11) neLXDE. Yaive inoshamisa, ndakaifarira kuna Lubuntu nekuti yekupedzisira inosiya dzimwe nzvimbo dziri pachena padhuze newachi ...
Ini ndanga ndisingazive LxpanelX uye inoratidzika kunge yakasarudzika !!
Kwaziso uye makorokoto pachinyorwa ichi!
Pindura kuna brutosaurus
ndiyo yaive yekupedzisira yakanaka shanduro yemindi, iyo 11 iine LXDE, iyo 13 (maya) haina kushata zvachose
Hmm, Mint LXDE… Handina kuzviedza, pamwe ndinofanira.
ndatenda, neese aya matipi akakosha kuisa LXDE
Yakanaka Versionitis akadaro
Stamina Lubuntu !!
Kupindura Acute Versionitis
Akanaka Matipi, anokukoka iwe kuti uedze LXDE, pamambure zvishoma zvishoma zvinotaurwa nezve ino desktop desktop. Ndatenda nekuisa.
Ndinoziva, kunyangwe pano hapana zvakawanda zvataurwa 😉 ndaiziva kuti ndaifanira kuita gwara reiyi hongu kana hongu.
Desktop yako inotaridzika zvakanaka.
Thanks 😉 Fedora LXDE ndeimwe yakanaka, ini ndakanganwa kuiwedzera ...
Ndanga ndisingazive nezve lxappearance-obconf. Chakanga chaora kuvhura zvese zviri zviviri. Zano rakanaka kwazvo!
Yakanaka gwara, ini ndaive paLubuntu kwechinguva, asi handisati ndambonzwa kugadzikana kunze kweXFCE.
Se data, ini ndinotenda kuti Lubuntu yatove chibodzwa chepamutemo.
andres daza akadaro
Ndanga ndichitsvaga yakanaka lxde distro… ini parizvino ndine Fedora 17 spin lxde uye ndinoikurudzira…. asi iwe wakandiita kuti ndide kuziva nezvekuparadzirwa kwerx yaRosa… unogona kundipa rumwe ruzivo nezvazvo?
Pindura andres daza
Zvakanaka, ndakangozviedza kwechinguva, asi ini ndinogona kutaura izvi: ine chitarisiko chakanaka (uye iyo skrini yekumba yakanaka zvakare), mashandisiro ayo haasi akakwirira (anenge 100MB ini ndinofunga), graphical package maneja ari chaizvo iri nyore kushandisa (Inodaidzwa kuti RPM Drake, uye hongu, ROSA inoshandisa mapakeji eRPM nekuti yakavakirwa paMadriva), inouya nemacodecs akati wandei (hameno, inouya neyakafa uye VLC ine mamwe macodec: D). Ndozvandakaona pakutanga kuona. Ini ndaiti iwe unongoda kuisa Compton kuti ive yakakwana, nekuti inouya neLXPanelX 🙂
Guillo Quintero akadaro
Imwe nguva yapfuura ndanga ndichiyedza lxde, inogona kushandiswa necompiz pasina matambudziko, zvingave zvakanaka kana ukaiwedzera mune iyo dzidziso. iwe unogona zvakare kushandisa kubatana-2d pani, kana iwe uchizofarira wepasi rose menyu 😛
Pindura Guillo Quintero
Guillo uye wakazviita sei? chii chekumisikidza menyu wepasi rose mu lxde?, ndeye kungoisa iyo kubatana-2d-pani yepakeji kana iwe unofanirwa kuita chimwe chinhu ???
Pindura kuna Paulo
Ndiri kufara nekuburitswa kwechinyorwa chino, sezvo zvichibatsira kwandinofarira desktop desktop, LXDE, kuve nehuvepo hwakawanda, sezvo zviri pachena kuti inogadzirisika uye kuti haina kana chekugodora kune mamwe marata. Uyezve, vamwe vanogona shanje LXDE chimwe chinhu chisina mumwe ane (pamwe E17): kupenya kwayo kwakanyanya.
PS: 'obkey' haisi mumabhuku eDebian.
Dzidziso huru uye zvese zvakanyatsotsanangurwa, makorokoto. Asi ini ndine mubvunzo, ndingaite sei kuisa lxpanelx?, Sezvo mune iyi link iwe yaunopa ingori chete projekiti repository. Kana zvikaitika zvachose, ndiri kushandisa Lubuntu.
Ah zvakanaka ini ndawana .deb raLubuntu, iro rinomhanya zvakanaka paDebian nezvimwe zvakadaro. Unogona kuikanda kubva kune ino repo https://launchpad.net/~daniel-go-mon/+archive/maloy-lubuntu
Sezvo iyi posvo isipo nemafungiro aCushingi, ndakafarira kuverenga zvaakataura zvekuti aigara achipikisana nevamwe. Ini ndinonzwa kuti Spaniard iye anodiwa, kunyangwe dai ndikaenda kuSpain ndikamuwana muchipatara chiri nani, ndaizomhanya ndoenda kune chimwe.
Pindura kuna Azazel
Arturo Molina akadaro
Yakanaka kwazvo posvo, ini ndakaita chirongwa chakazvininipisa kwazvo: p yezvifananidzo, muJava, kunyangwe ndichirangarira kune mupepeti uyo asisiri kuwedzera LXDE mune ezvirongwa menyu: p
Pindura kuna Arturo Molina
Ndatenda nemazano! NeMuvhuro ndakaronga kuiyedza pana debian. Chii chaunokurudzira kuti utarise netiweki dzeWi-Fi? Network-maneja, wi-cd, kana chimwe chakasiyana?
Ndakaedza zvese, uye ndainyanya kufarira NetworkManager zvirinani, hongu, neiyo gnome kumberi. Ndinonzwa ndakakwana. Zvino, kana iwe ukangoshandisa wired uye isina waya netiweki, unogona kushandisa Wicd uye ndizvozvo 🙂
Haha handiratidzike sewe ...
Uye zvino ndinobvisa sei LXMED?
Ndinoda kuisa iyo Nzvimbo submenu mukati meMenu. Pane mumwe munhu angandiudza kana zvichigona?
Ini ndoda kuisa Globalmenu kwandinogona kutanga. Dzimwe dzidziso.
William Prado akadaro
Ndingaite sei kuti ndiwane tafura yakaita seyako? Zvakare uye mumifananidzo.
Pindura William Prado
Chinhu chakapusa sekuisa pcmanfm usati wapinda kero yefaira chakagadzirisa musoro chaiwo wandaive nawo. Ini ndakangoisa LXDE pane yangu Ubuntu kuti iite zvirinani kwandiri uye zvaisave nenzira yekunditsvagira chero nzvimbo. Zvese zvandakawana yaive maforamu tambo dzakasiiwa makumi emakore apfuura nemhinduro kana kutyisidzirwa kwemhinduro dzaive dzisina basa kwandiri.
Naizvozvi, ndinogona kupedzisa kugadzirisa desktop yangu zvachose pane zvandinoda. Chokwadi ndechekuti ndiri kunyatsoda LXDE.
Fritzing: yemahara emagetsi dhizaini turu
Maitiro ekusetesa Arch Linux nekukurumidza uye nyore